Friend Zone ကနေရုန်းထွက်ပြီး ချစ်သူအဆင့်တတ်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)ခု - Lifestyle Myanmar
Friend Zone ကနေရုန်းထွက်ပြီး ချစ်သူအဆင့်တတ်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)ခု
Relationship နှင့်ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ “friend zone”မှာသောင်တင်နေခြင်းထက် ပိုဆိုးတဲ့အရာမရှိပါဘူး။ ဒီအနေအထားမှာ ပိတ်မိနေခြင်းက သင့်ကို ရှေ့ဆက်ရမလား? နောက်ဆုတ်ရမလားဆိုတဲ့ တွေဝေမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အချို့လူတွေက ရှေ့ဆက်ဖို့ ကြောက်ရွံ့ကြပြီး အချို့ကတော့ သူတို့ဘဝရဲ့ လပေါင်းများစွာ ၊နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲလွဲနေတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို တိုက်ထုတ်ကြပါတယ်။
အများစုက သူတို့ခံစားချက်တွေကို ဝန်ခံရမှာ ရှက်လို့၊ ဖွင့်ပြောလို့ တစ်ဖက်က လက်မခံရင် အရင်က သူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးတောင် ပြန်မရတော့မှာ၊ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားမှာစိုးတာကြောင့် နောက်ခြေလှမ်းကို လှမ်းဖို့ ကြောက်ကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအဖြစ်မှ ချစ်သူအဖြစ်သို့ ပြောင်းခြင်းဟာ လုပ်ဖို့ ခက်ခဲသော်လည်း သင့်နှလုံးသား အလိုဆန္ဒနောက်ကို လိုက်ရပါမယ်။
“friend zone”ကနေရုန်းထွက်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)ခု
၁။ အန္တရာယ်ကို ဆန်းစစ်ပါ
friend zone ကနေခုန်ထွက်ပြီး ချစ်သူဆက်ဆံရေးပြောင်းတဲ့နေရာမှာ အန္တရာယ်တွေရှိပါတယ်။ အလုပ်မဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ? နယ်နိမိတ်မျဉ်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီးတာနဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ပြန်သွားဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ အခြေအနေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကို ပရိုကျကျ စာရင်းပြုစုပါ။ အကျိုးကျေးဇူးတွေက အန္တရာယ်တွေကို ကျော်လွှားသွားနိုင်မလား? သူ(သို့) သူမအနေဖြင့် သူငယ်ချင်းအဆင့်ကနေ ပိုချင်တဲ့ အပြုအမှုတွေ(သို့) လက္ခဏာတွေ ရှိနေသလား။ နောက်အဆင့်မသွားခင်မှာ ဂရုစိုက်ပါ။
၂။ Game အစီအစဉ်ကို တိုးတတ််အောင်လုပ်ပါ
သင်ဟာ သူငယ်ချင်းအဆင့်ကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ အစီအစဉ် ရေးဆွဲရမယ့် အချိန်ပါပဲ။ သူ့ကို သင်ဘယ်လိုခံစားရကြောင်းပြောဖို့ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းထားတဲ့ ရိုမန့်တစ်ညစာစားပွဲ လုပ်ချင်သလား? (သို့) သဘာဝတွေ ဝန်းရံထားတဲ့ ပန်းခြံတစ်ခုကို ခေါ်ဆောင်သွားချင်ပါသလား?။ ဒါက သင့်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ကြေငြာချက်အတွက် အခါအခွင့်ပေးဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာ ၊ ဘယ်လိုပြောမယ်၊ ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ် ဆိုတာကို အစီအစဉ်ဆွဲပါ။ သူတို့ကို သင်အနှစ်သက်ဆုံး ကော်ဖီဆိုင်ကိုလည်း ခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။
၃။ မှန်ကန်သော အချိန်ကို ရှာဖွေပါ
ဘဝမှာ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်သတ်မှတ်ခြင်းက အရေးပါပါတယ်။ သင်ဟာ နောက်ဆုံးအပတ်မှာ သူငယ်ချင်းဇုန်ထဲက ခုန်ထွက်ဖို့ လူတစ်ယောက်ကို တောင်းဆိုချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ အချိန်ကို ရှာတာ အကောင်းဆုံးပါ။ နောက်တဖန် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ စိတ်ညှင်းဆဲမှုကို တိုးစေနိုင်တာကြောင့် စကားလက်ဆုံ ကြာကြာမပြောသင့်ပါဘူး။
၄။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပါစေ
သင်ဟာ အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာက နယ်နမိတ်မျဉ်းပေါ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့အခါ ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အတွက် စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ခံစားချက်ကို အခြားသူအား ပြောပြရန် သင့်ကြောက်စိတ်ကို ကျော်လွှားဖို့ သတ္တိမွေးရပါမယ်။ သင့်ခံစားချက်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဖွင့်ပြောဖို့ အခွင့်အရေးကို မယူဘူးဆိုရင် သူတို့ကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ရိုးသားခြင်းအားဖြင့် သင်ဆုံးရှုံးစရာ ဘာမှမရှိကြောင်း သတိရပါ။ ထိုင်ပြီး စိတ်ရှုပ်နေတာထက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။
၅။ လိင်မှုကိစ္စအကြောင်း တန်းမပြောပါနဲ့
သူငယ်ချင်းထက် ပိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မပြောထားဘူးဆိုရင် sex အကြောင်းမပြောသင့်ပါဘူး။ သူတို့က အရမ်းကို ဆက်စီဖြစ်ပြီး ဟော့နေတယ်၊ သင်က သူတို့ကို ချစ်ဖို့ အိမ်မက်မက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြေငြာချက်နဲ့ ထွက်လိုက်ရင် သင့်ကို သူတို့ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့နှင့်ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘာ့ကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း သူတို့ကိုပြောပြတာက ကောင်းပါတယ်။ သင်နှစ်သက်တဲ့ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေ (သို့) ဆံပင်တွေကဲ့သို့သော သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးတွေကို စာရင်းပြုစုပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလှအပထက် ကျော်လွန်ပြီး သင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စကားပြောဆိုမှုစွမ်းအားနှင့် တော်ကီတွေ ပေးချင်ရင် နှလုံးသားနဲ့ စကားပြောဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၆။ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောခြင်း
သင်ဟာ စာပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အီးမေးလ်ပို့ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောဆိုမှုတစ်ချို့ ရှိခဲ့မှာပါ။ စာတစ်စောင်ပို့ဖို့နှင့်သူတို့ဆီက အဖြေရဖို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ စောင့်ရတာက လွယ်ပါတယ် ။ သို့သော် သူတို့ကို မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး သင်ဘယ်လိုခံစားရကြောင်း ပြောပြတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်တာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားက သင် သူတို့ကို အလေးအနက်ထားကြောင်း သိသာစေပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသံကိုနားထောင်ပြီး သင့်ရဲ့နွေးထွေးတဲ့အကြည့်ကို သူတို့မြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်စာတစ်စောင်ပို့တဲ့အခါ No ဆိုပြီးတစ်လုံးတည််းနဲ့ ငြင်းဖို့ ပိုလွယ်သော်လည်း မျက်နှာချင်းဆိုင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်အမှန်ကို တစ်ယောက်က ငြင်းဆန်ဖို့ ပိုခက်ခဲပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဖွင့်ပြောမှုက သင်လိုချင်တဲ့အတိုင်း မသွားရင် သင့်ဂုဏ်သိက္ခာကို နဂိုအတိုင်းရှိနေလိုပါလိမ့်မယ်။ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ စကားပြောဆိုတာကိုလည်း ရပ်တန့်ချင်တယ်။ ပြောချင်တဲ့အချက်ကိုလည်း ရောက်ချင်တယ်။ ဒါဆိုရင် ဝါကျအနည်းဆုံးဖြစ်သော ကြေညာချက်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ပြပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူငယ်ချင်းထက်ပိုချင်ရင် အပေးအယူ (သို့) အသနားခံတာ(သို့) အနူးအညွတ်တောင်းပန်တာ မလုပ်ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖော်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးရင် သူ/သူမရဲ့ခံစားချက်ကို ပြောပြဖို့ အချိန်ပေးပါ။ အမြဲတမ်းယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ သူတို့ကို တိုက်ရိုက်စကားပြောပါ။ သင့်စကားလုံးတွေကို ချီတုံချတုံမဖြစ်ပါစေနဲ့။
၈။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုးသားပါ
အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုပဲပြိုကွဲသွားစေကာမှု သင်ကိုယ်သင် ရိုးသားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့က သင်လိုချင်တဲ့အဖြေ မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် သူတို့စိတ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကို စွဲကိုင်မထားပါနဲ့။
တကယ်လို့ သူတို့က သင့်အပေါ်မှာ စိတ်ခံစားမှုရှိတယ်၊ သူငယ်ချင်းဇုန်ကနေ ပြောင်းရွေ့ချင်တယ်လို့ ဝန်ခံတယ်ဆိုရင် ဒါက အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ဖို့ သင့်မှာ အလုံအလောက် ရိုးသားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ ချစ်သူအဖြစ်ကို ကူးသွားပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ပြန်လှည့်လို့ မရတော့ပါဘူး။
၉။ သင့်ကို သတိရစေပါ
သင်လိုချင်တဲ့အဖြေ မရခဲ့ရင် (သို့) သူတို့က အရာအားလုံးကို စဉ်းစားဖို့ အချိန်လိုတယ်ဆိုရင် သူတို့ကို စဉ်းစားခွင့်ပေးထားပါ။ အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ သင်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး အမှန်ကတယ် သူတို့ ဘယ်လောက် ဂရုစိုက်မိကြောင်း သူတို့ကို မြင်စေနိုင်တာကြောင့် သင့်အား လွမ််းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ သူငယ်ချင်းဇုန်မှာ ရှိနေခြင်းက သင့်စိတ်ကို ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်သော်လည်း တစ်ချိန်ချိန်မှာ တစ်ယောက်(သို့) နှစ်ယောက်စလုံးက သူငယ်ချင်းထက်ပို ချင်တဲ့ အတွင်းစိတ်တွန်းအားပေးမှု ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ သူငယ်ချင်းဇုန်ကနေ ထွက်ခွာခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သူတို့ဘယ်လိုခံစားရကြောင်း မသေချာပါက သူတို့ခံစားချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာက အချိန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ လိုအပ်ခဲ့ရင် ရှုံးနိမ့်ခြင်းကို လက်ခံပါ၊ ကူးပြောင်းပါ
သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ပြောပြီးလိုက်တာနဲ့ အရာရာကို ယခင်ကအတိုင်း ဘယ်တော့မှ ပြန်သွားနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သူတို့က သင်နှင့အတူ ဘာရင်ခုန်တွယ်တာမှုမှ မလိုချင်ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကို အပြီးဖြတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ friendship ကိုအဖက်ဆယ်နိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်က အကြိမ်အနည်းသာ ရှိပါတယ်။ လူတွေက သီးခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ သွားကြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်က ချစ်သူအဖြစ် ပတ်သတ်ချင်တယ်၊ တစ်ယောက်က သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။